War Deg Deg ah – Niman Dhalinyaro ah oo Lagu Tooriyeeyey Magaalada Oslo – Rasaasa News
War Deg Deg ah – Niman Dhalinyaro ah oo Lagu Tooriyeeyey Magaalada Oslo
Jun 13, 2010 War Deg Deg ah - Niman Dhalinyaro ah oo Lagu Tooriyeeyey Magaalada Oslo
Warar naga soo gaadhay magaalada Oslo ee dalka Norway, ayaa sheegaya in shaqaaqo ka kacday Jwxo-shiil dartii, ay laba wiil ku dhaawacmeen.
Warar hor dhaca ah, ayaa sheegaya in Jwxo-shiil, gaadhay magaalada Oslo ee dalka Norwy maanta, halkaas oo uu kaga qayb galayo kulan ay yeelanayaan xubno urur cusub oo Somali ah oo dhawaan si qarsoodi ah loo sameeyey lana magac baxay Midnimada Wadaniyiinta Somaliyeed [Somali Nationalism Unity], oo uu xubin ka yahay Jwxo-shiil.
Sida lagu qoray bogga qaarkoodse Jwxo-shiil, waxaa uu la kulmayaa Jaaliyad Somaliyeed, waa sida ay hadalka u dhigteene.
Hadaba shaqaada ayaa ka kacday muran dhex maray laba kooxood oo iska soo horjeeda oo ay midna taageerto Jwxo-shiil midna ay ka soo horjeedo. Waxaana goobta shaqaaqada ka dhacay gacan qaadayo iskugu jira feedh, budhadh iyo tooriyo.
Sida ay wararku sheegayaan waxaa isbitaal la dhigay laba wiil oo ka mid ah dadkii uu dagaalku u dhaxeeyey, ka dib kolkii ay tooriyo isweydaarsadeen. Xaalada labada wiil ayaa caadi ah in kasta oo kolkii hore mid wiilasha ka mid ah ay xaaladiisu liidatay.
Dhibaatooyinka uu Jwxo-shiil, dhex dhigay dadweynaha Somalida Ogadeeniya ayaa isugu soo ururay dibadaha iyada oo ay gacan qaadyo ka dhacaan meel walba oo la isugu yimaado. Guul darooyinka ka soo raacay gudaha Ogadeeniya iyo kala guurkii Jwxo ee uu goobta xun dhigay ayaa leh arimahan dibadaha.
Waxaana dalalka qaarkood laga mamnuucay isu imaatinadii ay samayn jireen Jaaliyaadku, iyada oo ay Booliska dalalkaasi door bideen in uusan dhicin wax isu imaatin ah, madaama ay rabsho ka bixi wayday Jaaliyada Somalida Ogadeeniya.
Dhibaatadan dhacaday ayaa waxay dabo socotaa dhibaatooyin sidan oo kale u dhacay oo uu Jwxo-shiil ka dambeeyo. Dambiyadii uu gudaha Ogadeeniya ku soo galay aya waxaa u dheer dhibaatooyinka uu ka dhex wado dalalka reer galbeedka.
wixii ka soo kordha xaalada labada wiil iyo magacyadooda waanu idiin soo gudbin doonaa kolka ugu horeysa ee aan helo warka oo dhamays ah.